Nzuzo emeputa | Ogologo & teknụzụ dị elu - Ike mgbe niile
Bọchị Mbido: August 1, 2017
Ihe nzuzo a na-ekpughe omume nzuzo maka EVER-POWER GROUP CO., LTD. na weebụsaịtị anyị: https://www.ever-power.net. Nkwupụta nzuzo a na-emetụta naanị ozi nke weebụsaịtị a anakọtara, belụsọ ebe ekwuru na ọ bụghị. Ọ ga-agwa gị ihe ndị a:
Kedu ozi anyị na-anakọta;
Ndi nwe ya;
Otú enwere ike idozi ya;
Otu esi enweta ya;
Kedu ka esi agbanwe mgbanwe iwu;
Esi edozi nchegbu banyere iji data nkeonwe eme ihe.
Ozi Collection, Jiri, na Ịkekọrịta
Anyị bụ naanị ndị nwe ihe ọmụma anakọtara na saịtị a. Naanị anyị nwere ike ịnweta / ịnakọta ozi ị ji obi gị nye anyị site na email ma ọ bụ kọntaktị ọzọ sitere na gị. Anyị agaghị ere ma ọ bụ ịgbazite ozi a na onye ọ bụla.
Anyị ga-eji ozi gị zaghachi gị, gbasara ihe kpatara ị kpọtụrụ anyị. Anyị agaghị ekekọrịta ozi gị na ndị ọzọ ọ bụla na mpụga nke nzukọ anyị, ọzọ karịa ka ọ dị mkpa iji mezuo arịrịọ gị, dịka, iji zipu iwu.
May nwere ike ịpụ na kọntaktị ọ bụla n'ọdịnihu site n'aka anyị n'oge ọ bụla. Nwere ike ime ihe ndị a n'oge ọ bụla site na ịkpọtụrụ anyị site na adreesị ozi-e ma ọ bụ akara ekwentị enyere na weebụsaịtị anyị:
Hụ data anyị nwere banyere gị, ọ bụrụ na ọ dị.
Gbanwee / dozie data anyị nwere gbasara gị.
Mee ka anyi wepu ihe obula anyi nwere banyere gi.
Gosipụta nchegbu ọ bụla ị nwere gbasara iji data gị
Iji jiri webụsaịtị a, onye ọrụ ga-ebu ụzọ mejupụta akwụkwọ ndebanye aha. N'oge ndebanye aha, achọrọ onye ọrụ ka enye ụfọdụ ozi (dị ka aha na adreesị ozi-e). Ejiri ozi a iji kpọtụrụ gị gbasara ngwaahịa / ọrụ dị na saịtị anyị nke ị gosipụtara mmasị. N’ime nhọrọ gị, ị nwekwara ike ịnye ozi igwe mmadụ (dịka okike ma ọ bụ afọ) gbasara onwe gị, mana achọghị ya.
Anyị na-arịọ gị ozi n'aka gị na ụdị akwụkwọ anyị. Iji zụta n'aka anyị, ị ga-enyerịrị ozi ịkpọtụrụ (dị ka aha na adreesị mbupu) yana ozi gbasara ego (dị ka nọmba kaadị akwụmụgwọ, ụbọchị mmebi). A na-eji ozi a maka ebumnuche ịgba ụgwọ na iji mejupụta iwu gị. Ọ bụrụ na anyị nwee nsogbu ịhazi iwu, anyị ga-eji ozi a iji kpọtụrụ gị.
Anyị na-eso ndị mmekọ anyị na ndị mgbasa ozi anyị ekerịta ozi igwe mmadụ. Ejikọghị nke a na ozi gbasara onwe gị nwere ike ịmata mmadụ ọ bụla.
Na / ma ọ bụ:
Anyị na-eji ụlọ ọrụ na-ebupu ụgbọ mmiri n'èzí iji nye iwu maka mbupu ụgbọ mmiri, yana ụlọ ọrụ na-ahazi kaadị akwụmụgwọ iji kwụọ ndị ọrụ ụgwọ maka ngwa na ọrụ. Companieslọ ọrụ ndị a anaghị ejikọ, kesaa, chekwaa ma ọ bụ jiri ozi amata onwe ha maka ebumnuche nke abụọ na-enweghị ịjuju usoro gị.
Anyị na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe iji nye ọrụ ndị akọwapụtara. Mgbe onye ọrụ debanyere aha maka ọrụ ndị a, anyị ga-ekekọrịta aha, ma ọ bụ ozi kọntaktị ndị ọzọ dị mkpa maka ndị ọzọ iji nye ọrụ ndị a. Anaghị anabata ndị a iji ozi amata onwe ha ma ewezuga nzube nke ịnye ọrụ ndị a.
Anyị na-akpachapụ anya iji kpuchido ozi gị. Mgbe ị nyefere ozi ndị dị mwute site na weebụsaịtị, a na-echekwa ozi gị ma n'ịntanetị na n'ịntanetị.
Ebe ọ bụla anyị nakọtara ozi dị nro (dị ka data kaadị akwụmụgwọ), a na-ezipụ ozi ahụ ma zigara anyị n'ụzọ dị nchebe. Can nwere ike ịchọpụta nke a site na ịchọ akara mkpọchi emechiri emechi na ala ihe nchọgharị weebụ gị, ma ọ bụ na-achọ "https" na mmalite nke adreesị nke ibe weebụ.
Ọ bụ ezie na anyị na-eji izo ya ezo iji chebe ozi dị nro nke a na-ebufe n'ịntanetị, anyị na-echebekwa ozi gị na offline. Naanị ndị ọrụ chọrọ ozi ahụ iji rụọ ọrụ ụfọdụ (dịka ịgba ụgwọ ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa) ka enyere ohere ịnweta ozi nkeonwe. A na-edebe kọmputa / sava ndị anyị na-echekwa ozi nkeonwe na-echekwa na gburugburu nchekwa.
Anyị na-eji "kuki" na saịtị a. Kuki bụ otu data echekwara na draịvụ ike onye ọbịa na saịtị iji nyere anyị aka melite nnweta gị na saịtị anyị ma chọpụta ndị ọbịa bịara na saịtị anyị. Dịka ọmụmaatụ, mgbe anyị jiri kuki iji mata gị, ị gaghị abanye na paswọọdụ karịa otu oge, si otú a na-echekwa oge mgbe anyị na saịtị anyị. Kuki nwekwara ike inyere anyị aka ịchụso na ibute ọdịmma nke ndị ọrụ anyị iji bulie ahụmịhe ha na saịtị anyị. Ojiji kuki enweghị njikọ jikọrọ ya na ozi amata mmadụ na saịtị anyị.
Offọdụ ndị anyị na ha na-azụkọ ahịa nwere ike iji kuki na saiti anyị (ịmaatụ, ndị mgbasa ozi). Agbanyeghị, anyị enweghị ịnweta ma ọ bụ nwee ike ịchịkwa kuki ndị a.
Ebe nrụọrụ weebụ a nwere njikọ nke saịtị ndị ọzọ. Biko mara na anyị anaghị aza ajụjụ maka ọdịnaya ma ọ bụ omume nzuzo nke saịtị ndị ọzọ. Anyị na-agba ndị ọrụ anyị ume ịmara mgbe ha hapụrụ saịtị anyị ma gụọ nkwupụta nzuzo nke saịtị ọ bụla ọzọ na-anakọta ozi nkeonwe.
Nyocha na Ntugharị
Site n'oge ruo n'oge, saịtị anyị na-arịọ ozi site na nyocha ma ọ bụ asọmpi. Ikere isonye na nyocha ndị a ma ọ bụ n'asọmpi ndị a bụ ihe afọ ofufo ma ị nwere ike họrọ ma isonye ma ọ bụ ịhapụ ịkọwapụta ozi a. Ozi a choro nwere ike ibu ihe omuma banyere ya (dika aha ya na adresị ebugharị ya), yana ozi igwe mmadu (dika zip koodu, akara ogo). A ga-eji ozi kọntaktị iji gosi ndị meriri ma nweta ihe nrite. A ga-eji ozi nyocha maka nzube nke nlekota ma ọ bụ melite ojiji na afọ ojuju nke saịtị a.
Nkwa nke Ngbanwe
Mgbe ọ bụla agbanwere ihe onwunwe na ọkwa nzuzo kwupụta otu ị ga-esi gwa ndị ahịa.
Ndokwa ndị ọzọ dịka Iwu Chọrọ
Enwere ike ịchọrọ ọtụtụ ndokwa na / ma ọ bụ omume n'ihi iwu, nkwekọrịta mba ụwa, ma ọ bụ omume ụlọ ọrụ. Ọ dị gị n'aka ikpebi ihe omume ndị ọzọ a ga-agbaso na / ma ọ bụ ihe ngosi ndị ọzọ achọrọ. Biko lee ọkwa pụrụ iche nke Iwu Nchedo Nzuzo nke California (CalOPPA), nke a na-emezigharị ugboro ugboro ma ugbu a gụnyere ngosi ngosi maka akara ngosi "Esona Track".
Ọ bụrụ na ọ dị gị ka anyị anaghị asọpụrụ iwu nzuzo a, ị kwesịrị ịkpọtụrụ anyị ozugbo site na email na [email protected] .